နှားတဈကောငျနဲ့ ကြားသဈကွားက ထူးခွားတဲ့ အခဈြဇာတျလမျး (ရုပျသံ)
Homenewsနှားတဈကောငျနဲ့ ကြားသဈကွားက ထူးခွားတဲ့ အခဈြဇာတျလမျး (ရုပျသံ)
အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ကြေးလကျဒသေ တဈခုမှာ ရိုကျကူးထားခဲ့တဲ့ပုံက အရမျးကို ထူးဆနျးနပေါတယျ။ ပုံထဲမှာ နှားက ကြားသဈကို ဖကျထားပေးထားတဲ့ ပုံစံကွောငျ့ အရမျးကို နာမညျကွီးနပေါတယျ။
နှားနှငျ့ ကြားသဈက သူငယျခငျြးကောငျးတှေ ဖွဈနိုငျဖို့ ဆိုတာ လှယျကူတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။ ပုံပွငျထဲမှာတော့ ရှိကောငျးရှိနိုငျပမေယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာကတြော့ မွငျတှရေ့ဖို့က ခဲယဉျးလှနျးလှပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပုံထဲက ကိစ်စကတော့ အပွငျမှာ တကယျဖွဈခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတှေ ကွာနပေမေယျ့လညျး ပုံကို မွငျတှသေူ့တိုငျးကတော့ အခုထိ အံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူး။
အရှယျရောကျပွီးသား ကြားသဈတဈကောငျနှငျ့ နှားတဈကောငျတို့ဟာ မိခငျတဈဝမျးထဲက မှေးသလို အရမျးကို ခဈြကွပွီးတော့ အတူတူ နထေိုငျကွပါတယျ။ ပုံထဲကထကျ တကယျ့အပွငျမှာက ပိုစိတျဝငျစားစရာ ကောငျးပါတယျ။ လူအခြို့ကတော့ ဓာတျပုံကို ပွငျထားတယျလို့ ပွောနကွေပမေယျ့ ဒါဟာ တကယျအ စဈအမှနျပါပဲ။
ဒီပုံတှဟော (၁၉) နှဈလောကျ ကွာခဲ့ပွီးဖွဈပမေယျ့ ခုခြိနျထိ အငျတာနကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝကျဘျဆိုကျတှကေလညျး သတငျးအဖွဈ တဈခါတဈရံမှာ တငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးက အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ဂူဂြာရတျပွညျနယျ၊ အနျတိုလီရှာမှာ တကယျဖွဈပကျြခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆယျစုနှဈတှေ ကွာခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ သတငျးကို ပွနျလိုကျရတာတော့ မလှယျပါဘူး။ အရမျးကို ခကျခဲပွီးတော့ တျောတျောလဲ ကွမျးတမျးပါတယျ။ Hoax-debunking website Social Media Hoax Slayer ရဲ့ အဆိုအရ အစောဆုံး သတငျးရငျးမွဈဟာ ၂၀၀၂ ခုနှဈ Times of India website မှာ တငျခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ မူရငျး ဇာတျလမျးကတော့ social media ပျေါမှာ မွငျတှနေ့ကေမြဟုတျပဲ ထူးဆနျးနပေါတယျ။
၂၀၀၂ ခုနှဈအောကျတိုဘာလမှာ Antoli ရှာလေးဟာ အရမျးကို အေးခမျြးခဲ့ပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ မထငျမှတျပဲ ကြားသဈတဈကောငျက ရုတျတရကျကွီး ပျေါလာခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ ရှာသားတှကေလညျး အရမျးကွောကျလနျ့ခဲ့ပွီးတော့ ကြီးလနျ့စာ စားနခေဲ့ရပါတယျ။ ထူးဆနျးတာတဈခုက ကြားသဈက ရှာထဲက တိရစ်ဆာနျတှေ၊ လူတှကေို စိတျမဝငျစားပဲ နှားတဈကောငျနားကိုပဲ စိတျဝငျစားနခေဲ့ပါတယျ။
“ ကြားသဈက ရှာနဲ့ပိုပွီး နီးကပျလာတာကွောငျ့ နတေို့ငျး ကွောကျလနျ့နရေတယျ ” လို့ Times of India ကို ရှာသားတဈယောကျက ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ ကွောငျအကွီးကွီးက ဖွညျးဖွညျးခငျြးလာပွီး ငှကျမှေးလိုပဲ လထေဲကို ခုနျလိုကျပွီး နှားခေါငျးပျေါကို သူ့ရဲ့လကျတှေ ညငျညငျသာသာ တငျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ အသံတိုးတိုးလေးတှေ ကွားရတယျ။ နှားကနူးညံ့တဲ့ ခံစားခကျြကွောငျ့ ငွိမျခံနတေယျ။ ကြားသဈက အပြျောသဘော ခံစားခကျြနဲ့ ပှဖေ့ကျနတောကိုလညျး သိတယျ ” လို့ ပွောပါသေးတယျ။
နှားနှငျ့ ကြားသဈက ဒီလို ဆကျဆံရေးတှေ ရှိနတောကွောငျ့ လူတှကေ စိတျဝငျစားလာကွပွီး ညတိုငျး လာလာခြောငျးကွညျ့လေ့ ရှိပါတယျ။ ရှာသားတှကေ ည ၁၀ နာရီနဲ့ သနျးခေါငျယံကွားဆို ခေါငျမိုးပျေါကို တကျပွီး ခြောငျးကွညျ့ကွတာပါ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး လာကွညျ့တဲ့သူတှကေ မြားပွားလာတာကွောငျ့ ကြားသဈကလညျး ခွောကျတဲ့သဘောအနနေဲ့ ဒေါသထှကျ ခဲ့ပါသေးတယျ။
“ ကြှနျတျောတို့ နတေို့ငျး စောငျ့ကွညျ့နတေယျ၊ ဒါပမေယျ့ ကံမကောငျးစှာနဲ့ ကြားသဈရောကျလာတဲ့ အကွိမျရကေ လြော့နညျးသှားတယျ” လို့ Vadodara ရဲ့ဂုဏျထူးဆောငျ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျအုပျ Rohit Vyas က ပွောပါတယျ။
ဆိုရှယျ မီဒီယာပျေါမှာတော့ ထငျကွေးအမြိုးမြိုး ပေးနကွေပါတယျ။ ကြားသဈကပဲ လမျးပြောကျပွီး နှားနားရောကျလာတာလား၊ သူတို့နှဈကောငျက ငယျငယျကတညျးက သိခဲ့ကွတဲ့ မိတျဆှတှေပေဲ ဖွဈနမေလား ဆိုပွီး အမြိုးမြိုး ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
သဈတောထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျသူတဈဦးကတော့ ကြားသဈဟာ လူသားတှရေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွီးပွငျးလာပွီးအိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှနှေငျ့အကြှမျးတဝငျရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သဈတောထိနျးသိမျးရေး ပညာရှငျ H.S. Singh ကတော့ ဒီရှာလေးဟာ တောနဲ့ အရမျးနီးကပျနတောကွောငျ့ ကြားသဈဟာ ဒီလိုနနေတောလို့လညျး ပွောပါတယျ။
အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလိုပဲ ကြားသဈနှငျ့ နှားက တကယျ ရှိတယျဆိုရငျ နှားကကွောကျလနျ့ပွီး ထှကျမပွေးတာက အံ့ဩစရာ ကောငျးပါတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေး ဘယျလိုပွီးဆုံးသှားလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယျသူမှ တိတိကကြ မပွောနိုငျပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ သခြောတာတဈခုက သတငျးထုတျပွနျပွီးတဲ့နောကျ ဆယျစုနှဈ နှဈခုနီးပါး ဒီဇာတျလမျးက လူသနျးပေါငျးမြားစှာကို စှဲဆောငျနဆေဲပါ။
နွားတစ်ကောင်နဲ့ ကျားသစ်ကြားက ထူးခြားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကျေးလက်ဒေသ တစ်ခုမှာ ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ပုံက အရမ်းကို ထူးဆန်းနေပါတယ်။ ပုံထဲမှာ နွားက ကျားသစ်ကို ဖက်ထားပေးထားတဲ့ ပုံစံကြောင့် အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေပါတယ်။
နွားနှင့် ကျားသစ်က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာကျတော့ မြင်တွေ့ရဖို့က ခဲယဉ်းလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပုံထဲက ကိစ္စကတော့ အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာနေပေမယ့်လည်း ပုံကိုမြင်တွေ့သူတိုင်းကတော့ အခုထိ အံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသား ကျားသစ်တစ်ကောင်နှင့် နွားတစ်ကောင်တို့ဟာ မိခင်တစ်ဝမ်းထဲက မွေးသလို အရမ်းကို ချစ်ကြပြီးတော့ အတူတူ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ပုံထဲကထက် တကယ့်အပြင်မှာက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ လူအချို့ကတော့ ဓာတ်ပုံကို ပြင်ထားတယ်လို့ ပြောနေကြပေမယ့် ဒါဟာ တကယ်အ စစ်အမှန်ပါပဲ။
ဒီပုံတွေဟာ (၁၉) နှစ်လောက် ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်ထိ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကလည်း သတင်းအဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံမှာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်၊ အန်တိုလီရွာမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ သတင်းကို ပြန်လိုက်ရတာတော့ မလွယ်ပါဘူး။ အရမ်းကို ခက်ခဲပြီးတော့ တော်တော်လဲ ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ Hoax-debunking website Social Media Hoax Slayer ရဲ့ အဆိုအရ အစောဆုံး သတင်းရင်းမြစ်ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် Times of India website မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မူရင်း ဇာတ်လမ်းကတော့ social media ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေကျမဟုတ်ပဲ ထူးဆန်းနေပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Antoli ရွာလေးဟာ အရမ်းကို အေးချမ်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ပဲ ကျားသစ်တစ်ကောင်က ရုတ်တရက်ကြီး ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ရွာသားတွေကလည်း အရမ်းကြောက်လန့်ခဲ့ပြီးတော့ ကျီးလန့်စာ စားနေခဲ့ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ကျားသစ်က ရွာထဲက တိရစ္ဆာန်တွေ၊ လူတွေကို စိတ်မဝင်စားပဲ နွားတစ်ကောင်နားကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်။
“ ကျားသစ်က ရွာနဲ့ပိုပြီး နီးကပ်လာတာကြောင့် နေ့တိုင်း ကြောက်လန့်နေရတယ် ” လို့ Times of India ကို ရွာသားတစ်ယောက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ကြောင်အကြီးကြီးက ဖြည်းဖြည်းချင်းလာပြီး ငှက်မွှေးလိုပဲ လေထဲကို ခုန်လိုက်ပြီး နွားခေါင်းပေါ်ကို သူ့ရဲ့လက်တွေ ညင်ညင်သာသာ တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အသံတိုးတိုးလေးတွေ ကြားရတယ်။ နွားကနူးညံ့တဲ့ ခံစားချက်ကြောင့် ငြိမ်ခံနေတယ်။ ကျားသစ်က အပျော်သဘော ခံစားချက်နဲ့ ပွေ့ဖက်နေတာကိုလည်း သိတယ် ” လို့ ပြောပါသေးတယ်။
နွားနှင့် ကျားသစ်က ဒီလို ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် လူတွေက စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး ညတိုင်း လာလာချောင်းကြည့်လေ့ ရှိပါတယ်။ ရွာသားတွေက ည ၁၀ နာရီနဲ့ သန်းခေါင်ယံကြားဆို ခေါင်မိုးပေါ်ကို တက်ပြီး ချောင်းကြည့်ကြတာပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လာကြည့်တဲ့သူတွေက များပြားလာတာကြောင့် ကျားသစ်ကလည်း ခြောက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ ဒေါသထွက် ခဲ့ပါသေးတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း စောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကျားသစ်ရောက်လာတဲ့ အကြိမ်ရေက လျော့နည်းသွားတယ်” လို့ Vadodara ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အုပ် Rohit Vyas က ပြောပါတယ်။
ဆိုရှယ် မီဒီယာပေါ်မှာတော့ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုး ပေးနေကြပါတယ်။ ကျားသစ်ကပဲ လမ်းပျောက်ပြီး နွားနားရောက်လာတာလား၊ သူတို့နှစ်ကောင်က ငယ်ငယ်ကတည်းက သိခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေပဲ ဖြစ်နေမလား ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
သစ်တောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးကတော့ ကျားသစ်ဟာ လူသားတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် H.S. Singh ကတော့ ဒီရွာလေးဟာ တောနဲ့ အရမ်းနီးကပ်နေတာကြောင့် ကျားသစ်ဟာ ဒီလိုနေနေတာလို့လည်း ပြောပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျားသစ်နှင့် နွားက တကယ် ရှိတယ်ဆိုရင် နွားကကြောက်လန့်ပြီး ထွက်မပြေးတာက အံ့ဩစရာ ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လိုပြီးဆုံးသွားလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါး ဒီဇာတ်လမ်းက လူသန်းပေါင်းများစွာကို စွဲဆောင်နေဆဲပါ။